IKO UWA UMU NWAANYI: ỤGHA FALCONETS NKE NIGERIA NA-EMERI HAITI
Home arundel mills casino granite falls mn casino
Nwanyi Nigeria nke di n’okpuru umunwanyi iri abuo na abuo, Falconets meriri Haiti 1-0 na Thursday ka ha nwee olile anya ndu n’ime ihe ha na-acho ime ka ha banye n’ime onu ogbugbu na FIFA n’okpuru World Women World Cup na France.
Egwuregwu ahụ na Stade de Marville dị na obodo French nke Saint-Malo hụrụ otu onye ọrụ ndị agha bụ Rasheedat Ajibade nke na-etinye nanị ihe mgbaru ọsọ nke egwuregwu ahụ site na mgbaji mbụ ọkara.
Ihe mmeri nke natara Naijiria kachasi ihe atọ malitere na oke iwe ma obughi ndi ozo nwere ike ime ihe obula n’ebube.
O were rue oge nkeji iri isii na isii iji hụ ihe ga-eme, ebe Nigeria na-enye ya ugwo maka Anam Imo ka Hagen Douglyie Joseph merụrụ ahụ n’ógbè ahụ.
Ajibade, onye bu onye nchoputa kacha elu nke Afrika n’oru maka France 2018, mehiere mgbe e nyere ya ohere ma gbanwee ihe meghariri ka oburu ihe mgbaru oso mmeri site na onyonyo 12.
Haiti zara ya ka ha na-aga n’agbanyeghi na Nerilia Mondesir ekweghi ya mgbe o kwusiri agha.
Ndị Caribbean nọgidere na-akwali maka nhazi ahụ ma onye nchebe Chiamaka Nnadozie, bụ onye e mesịrị họrọ “Player of the Match” ‘, gosipụtara ihe ọ bụla bịaara ya.
Mondesir na Melchie Dumonay weere ọtụtụ n’ime ụzọ na-aga n’ihu, na-achọ ihe ize ndụ n’oge ụfọdụ, ma akwụkwọ nchịkwa Nigeria, bụ nke a na-akpọ Nnadozie, mere maka mmeri ahụ.
Akwụkwọ akụkọ News nke Nigeria (NAN) na-akọ na mmeri ahụ mere ka Nigeria kwụsị tebụl otu ebe site na ebe anọ mgbe ememme Monday ga-abanye na nke abụọ mgbe ọkụkọ nke Thursday gasịrị.
APC KWARA NA-AJU NKEWA, KWURU NA IHE NWC KWURU BU IWU EMEGHIDERE
Germany, ndi meriri Naijiria na Monday, ndi agha mmeri nke Naijiria na Monday, guzosiri ike dika ndi otu D mgbe ndi agha meriri China PR 2-0 na ndi otu egwuregwu MatchDay 2 ndi ozo n’oge gara aga.
Naijiria ugbu a, ọ dịkarịa ala ọ ga-abụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ịmịchaa nke abụọ ma ọ bụrụ na ị ga-ebute bọmbụ nke ikpeazụ nke ikpeazụ, ọ ga-abụ na ị ga-abanye na egwuregwu ikpeazụ ha.
Germany na-eche Haiti ihu na Mọnde na Stade de la Rabine na Vannes na egwuregwu ikpeazụ ha na-eme egwuregwu ma na-elepụ anya na ndị isi na-apụta, ọbụna mgbe a nwụsịrị.
Ndị Falconets nwere ike ijide n’aka na ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ ma ọ dịkarịa ala ihe a na-eme megide China PR na Clos Gastel Stadium na Lehon, na Dinan-Lehon, ọbụna ma ọ bụrụ na Haiti meriri Germany.
ỌDACHI: NDI UWEOJII ANO NWURU NA NDI NA-EZU OHI NA NZUZO
Pingback: ỌDACHI: NDI UWEOJII ANO NWURU NA NDI NA-EZU OHI NA NZUZO